Anaga Goobjooge - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ku saabsan Goobjooge.com: Goobjooge Online : Warbaahin xog ka hadal ah…!!!
(Investigative Journalism from Somalia)
Goobjooge Online, wuxuu ka dhashay baahi loo qabo inay Saxaafadda Soomaaliya ka gudubto heerka dhacdo tebinta ah ee ay ku dhowaad 20-sano ku shaqeyneysay, waxaana himilada la hiigsanayo ay tahay in la helo Warbaahin horumarsan oo la jaan qaadi karta dhigeeda goboleed iyo caalamkaba.
Saxaafadda waxaa lagu tilmaami jiray awooda afaraad ee Adduunka, laakiin waxaa la isku raacsan yahay in xilliyadan dambe ay heerkaasiba ka soo gudubtay oo ay gaarsiisan tahay awoodda Koowaad ama Labaad, waxaana jira tusaalooyin taageeraya fikradan oo ay ugu horeyso qeybtiii Warbaahinta galbeedka siiba Mareykanku ka qaadatay dagaalkii lagu qabsaday dalka Ciraaq sanadkii 2003-kii.
Goobjooge.com wuxuu uga duwan yahay Warbaahinta sida caadiga ah waxaa dhacda inay Saxaafaddu
ku kooban tahay gudbinta warar maalmeedka dhaca, wareysiyo iyo waxyaabaha soo raaca sida Barnaamijyo maalinle ah, Iidheh iyo madadaalo kooban taasina waxay ciriiri gelisay fahamkii Saxaafadda laga qabay dadkeena Soomaaliyeed dhexdiisa.
Waayo-jooggii hore ee Saxaafadda Soomaaliya waxay howsha Warbaahintu ku tilmaameen inay ku kooban tahay:
⇒ Wargelin ay dadkii wixii jira u tebiso.
⇒ Waxbarasho ay dadka hadba wax cusub ka faa’iideystaan.
⇒ Iyo madadaalo ay ka helaan inay ku nastaan.
Wargelinta iyo waxbarashada laga sugayo Warbaahinta ma xaqiiqoobeyso ilaa laga helo Saxaafad dhameystiran oo mihnad ahaan, shaqo ahaan, tayo iyo tiro ahaanba miisaaman, isla markaana heli karta xogta ay u baahan tahay si loogu soo hirto, sidaasi darteed Goobjooge.com waxaa hal-heys u ah: Goobjooge waa Warbaahin meel walba joog ah!!!
Ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa hirgelinta Goobjooge.com waa in la helo Warbaahin ku howlgaleysa habka loo yaqaan Saxaafadda dabagalka (Investigative Journalism) oo aan ka jirin Soomaaliya guud ahaan, isla markaana aanay jirin ilaa iyo iminka cid ku howlgashay, ha ahaato TV, Idaacad, Wargeys, Online iyo qeybaha kale ee Saxaafadda.
Waa la fahmi karaa caqabadaha waaweyn ee ka hor imaanaya saxafiga doonaya inuu sameeyo Barnaamij lagu tilmaami karo dabagal saxaafadeed, ka sokow imkaaniyaadka la heli karo oo aad u yar, waxay caqabadda ugu weyni tahay tiiyoo aanay dadkeenu nooc waliba oo ay yihiin Saxaafadda u arkaan wax dhibaato ku ah ama aanay sirahoodu u sheegi karin, waana taas dhibaatada ka hor imaaneysa Saxafiga isku daya inuu arrin ka sal-gaaro, lagana yaabee inuu xilli aad u dheer ku qaato diyaarinta hal mowduuc.
Iyadoo taasi jirto ayay hadana suuragal ahayn in gacmaha la isa saarto oo aanu ku koobnaano dhacdo maalmeed iyo wareysi daba-yaalla, waxayna nala noqotay inaynu asaas dhigno oo tallaabo horay u qaadno, socod kastaahi wuxuu ka bilowdaa tallaabo qura.